के संकेत पायो प्रहरीले ? काठमाडौमा यति ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, बढाइयो सुरक्षा - Thulo khabar
के संकेत पायो प्रहरीले ? काठमाडौमा यति ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, बढाइयो सुरक्षा
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। फैसला पछि उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको आँकलन गर्दै प्रहरीले सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको हो । सर्वोच्चले सोमवार संसद पुनस्थापना गर्दै शेरवहादुर देउवालाई दुई दिन भित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
यो फैसलासंगै नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षको युवा समुह सर्वोच्च विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा युवाहरुले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । नेताहरुको प्रारम्भिक प्रतिकृया र आन्दोलन पनि सुरु भइसकेको अवस्थालाई लिएर काठमाडौं उपत्यकालगायत सबै ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिती गराइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले आफुहरु तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन् । सम्भावित आन्दोलन हुने ठाउँहरूलाई पहिचान गरी प्रहरी परिचालन गरिएको उनले बताए।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने भन्दै युवाहरुलाई आन्दोलनमा उत्रन माइतीघरमा बोलाएका छन् । उनको आह्वानमा युवाहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन समेत सुरु गरेका छन् । बस्नेतले फेसबुकमार्फत् देशभर सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध प्रदर्शन गर्न भनेका हुन्।
ुतुरुन्त अहिले नै माइतिघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालतको असंबैधानिक फैसलाविरुद्ध विरोध जनाउ। आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत चुकेको दिन,ुबस्नेतले लेखेका छन्,’निर्दलिय शाषण व्यवस्थाको पुन बिजारोपन भएको दिन।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाउमा सेट्ङ्ग वाला केही न्याय मुर्तिका नामधारीहरुले हातमा लिएको क्षण। अब देश राजनैतिक द्वन्दमा प्रवेश गरेको छ। यो परमादेश कार्वान्वयन गर्ने असंभब छ। युवा संघले यसको विरुद्ध तुरुन्तै माइतिघर मण्डलामा बिरोध प्रदशन गर्दैछ। जो जहाँ छौ सहभागी बनौ। देश भर विरोध प्रदशन गरौं।’